Igazi kubantu enempilo isebujameni ketshezi ngenxa kokusele coagulation futhi anticoagulation izinhlelo, i-plasma bese egazi kanye nokugcinwa njalo ukugeleza rate. Endabeni ka ushintsho ukungalingani phakathi izingxenye viscosity igazi kanye nezinye izici zalo. Kulesi sihloko sizoxoxa izimbangela igazi obukhulu futhi kanjani kulesi simo esiyingozi.
Kungani sikhula igazi?
Igazi - ke ingenye kwezicubu ezibaluleke kakhulu zezinzwa emzimbeni womuntu. Isimo sakhe sithinta ukusebenza kwezitho eziningi, ngakho-ke kubalulekile ukukhomba kudala njengoba izimbangela igazi uqweqwe akuqede. Lokhu sikubiza izizathu.
izinguquko bokuphila hormone kungavuka abesifazane ngesikhathi sokukhulelwa, ngesikhathi menopause futhi amadoda abaneminyaka engu-45, okubangelwa elibona nxazonke platelet kungaholela ukwehla nokugeleza kwegazi futhi ngenxa amahlule.
Kuvele overabundance acid emzimbeni.
Ukungabi enzyme, amavithamini, khona emzimbeni amagciwane kanye nezinambuzane.
Ukuphelelwa amanzi emzimbeni, ukuntuleka ukusetshenziswa uketshezi, ukusha, ukwehluleka kwezinso, isifo sikashukela nezinye izifo eziholela ukulahlekelwa uketshezi lomzimba.
Izifo pathology kohlelo zenhliziyo, ngenxa okungase kube khona i-stasis emithambo yegazi kwezitho zomzimba ezahlukene.
ukuchayeka isikhathi eside emzimbeni.
Ukusetshenziswa kwama-antibiotic neminye imithi, okuholela outflow anda uketshezi emzimbeni pollakiuria.
Nokukhuluphala khona eyodwa noma ngaphezulu zalezi zimpawu zingase zibe imbangela ukuqina igazi.
Izimpawu kanye nemiphumela
Kungakhathaliseki izimbangela igazi obukhulu kubantu, izimpawu zalesi simo cishe njalo afanayo: izinkinga ukukhathala, ubuthakathaka, ukukhathala, inkumbulo. Waba yini umphumela wesibindi khona igazi kumzungezile iziyaluyalu izitho eziningi emzimbeni womuntu. Ngokwesibonelo, iphaphu perfusion, kwenzeka ngenxa yokushodelwa umoya egazini; thrombosis futhi ngalesosizathu senhliziyo, unhlangothi. Ngakho-ke, kufanele izizathu igazi obukhulu kutholakala isikhathi.
Proper ukwelashwa ngegazi obukhulu angaqoka udokotela. Ngokuvamile, ukuthola izifo ezifana Kunconywa nokudla okunomsoco azosiza uqede zonke izimbangela zokuhlupheka igazi obukhulu. Ngo Ukudla yezokwelapha nsuku zonke zihlanganisa:
inqwaba okusamanzi (1.5 l);
zezinkambi engamakhambi, ayo fresh;
aspirin (ngokuzikhethela kwe-kwalo dokotela, ke aluboniswa uma izinkinga nesineke pheshana emathunjini);
amajikijolo, amakhiwane, imbewu sunflower, garlic, i-artichoke, ginger, kalanchoe, ukhokho.
Uma isiguli igazi obukhulu kakhulu, izizathu lokhu kungase yini ukucasha ekudleni okungalungile. Kulokhu, kutuswa ukuba aluqede ngokuphelele kusukela ekudleni, ekudleni kokulandelayo: ushukela, amazambane, ubhanana, iziphuzo ezibandayo, ukudla okunamafutha aphezulu kakhulu amaprotheni, amnandi, okunosawoti, ukudla ngibhema wort iSt John sika, nokunye okufana nokolweni.
Ozokusebenzisa futhi evuselela yayo
Isithende iqhubezela. Ukwelashwa nokuvikelwa amakhambi abantu kungasiza ekugwemeni ukuhlinzwa.
Ingcindezi luyanda: izindlela eziphumelelayo
Yiziphi thermometer ngaphandle mercury
Ngubani owelapha? Ephatha ukuthi lo dokotela?
Ukuhluka uhlela emakhishini ezincane
Into yokucocobalisa Supra: Uhlolojikelele, tinkhulumo, izici kanye nokubuyekeza
Ukulungiswa corset - okudingayo ukuba ulahlekelwe isisindo
Izivakashi izikhungo we-Altai Izintaba: Izibuyekezo nezithombe zezivakashi